-Dhacdo Shiinaha Dhagaha Dhagaha ee Saxda ah ee Wireless-ka ah ee leh Kiis Dallacaad Bir ah oo Madhan, Soo-saar Latency Hoose iyo Warshad |Roman
Dhagaha dhegaha ee Wireless-ka ee runta ah oo leh kiis dallacaad bir ah oo bannaan, daahitaan hoose
Waqtiga Muusiga: 3H
Waqtiga hadalka: 2H
Waqtiga heeganka: 80H
Battery-ga dhegaha: 33mAh*2
Ku dallaca batteriga saldhiga: 300mAh
aadka u khafiifsan & Stylish & Aluminium Alloy Hollow Design.
Bluetooth V5.1, Gudbinta Degdega ah iyo Isticmaalka Korontada Hoose.
Treble Pure & Bass Awood Leh: Laga soo bilaabo seddexleyda ugu sarreeya ilaa bass qoto dheer, PEK & PU Dual diaphragm waxay soo saartaa dhawaaq saafi ah, oo cajiib ah.Isku-dubbarid hal-tallaabo ah waxaad ku jiri doontaa adduunka muusiga euphonic dhowr ilbiriqsi gudahood.
Kiiska Dallacaadda Birta Godan: Jirka aadka u khafiifka ah ee 18mm waxa uu ka samaysan yahay aluminium aluminium miisaankiisu fudud yahay, iyo qaybta dallacaadda naqshadaynta godan ayaa tan ka dhigaysa mid la aqoonsan karo.
Jiilka soo socda ee chip-ka hooseeya wuxuu keenaa khibrada ciyaaraha degdega ah, daahitaanka habka maqalka ciyaarta ayaa ugu hooseeya 65ms, daahitaanka makarafoonka intercom wuxuu u hooseeyaa sida 38ms, taasoo kuu keenaysa khibrada ciyaaraha cusub, Daar / dami Habka dib u dhigista yar: taabo madaxa madaxa bidix 3 jeer si joogto ah.
Sanduuqa dallacsiinta aadka u khafiifka ah ee 18mm aad buu u fudud yahay, waa isku darka qumman ee miisaanka iftiinka iyo mustaqbalka eegida, (Cabir: 57.5mm x 46mm x 18mm).
Xakamaynta Taabasho Hal Far ah si loo Fududeeyo Hawlaha.
Sanduuqa Dallacaadda 300mAh Oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato muusigga ama aad wacdo wakhti dheer.
1. Fur daboolka sanduuqa dallacaadda, oo sameecad-weynuhu si toos ah ayuu u shidmay oo galaa qaabka lammaane, oo leh cod degdeg ah.
2. Daar Bluetooth-ka taleefanka oo raadi aaladaha dhegaha-dhegaha ee Bluetooth-ka.Ka dib markii la helo sameecadaha Bluetooth-ka, dhagsii Lammaanaha si aad u dhammaystirto isku xirka.
3.Muusika ciyaarista/hakinta: Marka muusiga la ciyaarayo, waxaad laba jeer taabataa taleefoonka bidixda (L) ama taleefoonka midigta (R) si aad u hakiso muusigga, ama ku celi falkii la mid ahaa si aad mar kale u bilowdo muusigga.
4.Previous Track: Dheeraad ah taabo taleefoonka gacanta bidix (L) ilaa 3 ilbiriqsi.
5. Raadraaca Xiga: Dheeraad ku taabo taleefoonka midigta (R) ilaa 3 ilbiriqsi.
6.Game mode: Taabo sameecadaha 3 jeer si aad u shido qaabka daahitaanka hooseeya, oo ay la socoto codka "beep-beep", ku celi qaliinka si aad u damiso habka hoose ee daahitaanka, oo ay la socoto "beep-beep-beep" " cod.
Hore: Qalabka dhegaha-dhegaha ee bilaa-waayirka ah ee Bluetooth 5.0, Taleefoonnada dhegaha ee-gudaha
Xiga: Sawaxanka Dhaqdhaqaaqa ee Wireless-ka ee Saxda ah ee Joojinta Dhagaha
Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Bluetooth Mono Headset, Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya,